शुभ प्रभात 6:50 बिहान ठूलो चिसो। २ 24 मौसमहरूको २th औं। बिहानी हुनुभन्दा अघि, वर्षको सबैभन्दा चिसो दिन, रूखहरू तीव्र हावाले उडाईन्छ र तापक्रम भन्दा चिसो महसुस गर्दछ। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, विलो शाखाहरूले पनि तीव्र नृत्य गरिरहेको देखिन्छ। मैले सुनेको छ कि चिसो जाडोको बिहान पानी एक बर्षसम्म सड्न सक्ने छैन, र धेरै घरपरिवारले तिनीहरूलाई कन्टेनरमा राख्छन् र भण्डारणमा भण्डार गर्दछन्। यो एक नयाँ हप्ताको सुरूवात हो। # ओहोरी पार्क # फुकुओका ...
शुभ प्रभात 6:52 बिहान। मैले शुटि started शुरू गरेको बित्तिकै, यो हल्का वर्षा शुरू भयो। जब तपाईं एलईडी बत्ती प्रज्जवलित गर्नुहुन्छ, तपाईं "वर्षाको पदचिन्ह" देख्न सक्नुहुन्छ। केहि मिनेट पछि, पूर्वी आकाश, acorn पार्क को छेउबाट देखिन्छ, एक बेहोश बैजनी संसार देखायो। Nakanoshima को हरियो र तपाईं दूरी मा देख्न सक्नुहुन्छ कि क्याफे को बत्ती संग एक सुखद बिहान। हिजो, मैले साथीलाई आमन्त्रित गरें र मोजिको गए। दुर्भाग्यपूर्ण मौसम जहाँ मौसम वर्षा हुन्छ। ...
शुभ प्रभात बिहान7बजे। पानी पछि वर्षा पछि आकाशमा फर्क्यो। दक्षिण दिशामा बोथहाउसको पक्षबाट हेर्दा, क्षितिजको माथि बादलहरूलाई ओभरल्याप गर्ने आकृति कुनै चित्रकला जस्तो देखिन्छ। १F80० ए १ एफ A० ए गत बर्षको अन्त्यदेखि दुई महिनाको लामो हिउँद बिरोध पछि फेब्रुअरी १ मा व्यापार पुनः सुरु हुनुभन्दा अघि हंस पोखरीमा फर्किएका छन्। यो यस्तो देखिन्छ कि तपाई हाई स्कूलको भवनबाट प्रकाश चुहिरहेको हेर्दै हुनुहुन्छ। ...
शुभ प्रभात 6:54 बिहान। आज बिहान आकाश अझै खैरो छ। यो टिप्पणी लेखिएको बेलामा सूर्योदय समयमा पनि लुकाइन्छ। नाकानोशिमाबाट एकोर्न पार्कको दिशा हेरेर, इरेरेट्सले पखेटामा पखेटा बाँधे। वास्तवमा, यो अँध्यारो छ र मात्र देख्न सकिन्छ, तर LED ...
शुभ प्रभात तपाईं आज बिहान चिसो पनि आउनुभयो। तापक्रम degrees डिग्री थियो, तर चिसो हावा चलिरहेको थियो, त्यसैले मेरा औंलाहरू पनि पन्जाले चोट पुर्‍यायो। कामोजिमामा रात बिताउने महान् सहकर्मीहरू बिहान कोठामा उनीहरूको मनपर्दो शाखाका साथ सामान्य रूपमा तयार भइरहेका छन्। अब देखि तिनीहरू हकता खाडीमा सबै उडान गर्नेछन्। पेन्सनमा बस्नेहरूका लागि, यस पटक कर फिर्ताको समस्या छैन? ...
शुभ प्रभात म आज बिहान सूर्योदय भेट्न सक्दिन। बोनसको रूपमा, वर्षाको पूर्वानुमान पनि आज उपलब्ध छ, त्यसैले बिहानको लागि केहि तस्वीर लिन असम्भव हुनेछ। 6:53 बिहान म प्रकाशको खोजीमा पार्कको वरिपरि गएँ। पूर्वपट्टि, जहाँ म सामान्यतया हेर्न जान्दिनँ, क्याफे पहिले उद्घाटन हुनु भन्दा ठीक अघि र यो धेरै न्यानो देखिन्छ। फोटोमा मनमोहक सडक बत्ती पनि सामेल गरिएको थियो। ...
शुभ प्रभात १ एफ A एए १ एफ A ए बिहान हुनुभन्दा अघि बिहान :00:०० बजेको थर्मामीटर, जब तापक्रम सबै भन्दा झर्छ, degrees डिग्री जनाउँछ। जब म थाँहा थिएँ, मेरा खुट्टा र औंलाहरू यति ठण्डा थिए कि स्क्वर्ट गर्नका लागि। 7:07 बिहान। बिहानको प्रतिक्षामा रहेको मैजरु ब्रिजबाट रातो टिin्गको अलिकति मात्र उज्यालो बादलबाट आयो। धेरै लामो समय पछि न्यानो प्रभात देख्न पाउनु अलि प्रभावकारी छ। ...
शुभ प्रभात 7:06 बिहान म आज बिहान सूर्योदय भेट्न सकिनँ, तर बादलहरूको माध्यमबाट सूर्यको किरण पानीको सतह (मिनामो) मा स्पष्टै प्रतिबिम्बित भयो र मलाई एक अद्भुत दृश्य दिनुभयो। बोथहाउसमा जमेको दही क्याफेले सामान्य रूपमा चाँडो नै तयारीको लागि तयारी गरिरहेको छ, सायद किनकि यो वयस्कहरूको लागि विशेष खोल हो। स्टोरबाट बत्तीहरू चुहिन लाग्दा चिसो हावामा चिसो हावा लाग्न सक्छ। ...
शुभ प्रभात बिहान हुनुभन्दा अघि जहाँ पछिल्लो रातको वर्षा बाँकी छ। यो शुटि forको लागि अनुपयुक्त थियो, तर मलाई चिसो लाग्दैन, त्यसैले म बाहिर गएँ। शूटिंग स्थान को खोज मा, उरुरो ... यो मैले फेला परेको अन्तिम चीज हो। मेरो पसंदीदा स्थान मैजुरु ब्रिजको नजिक। दक्षिणी तर्फ हेरेर, अपार्टमेन्टको प्रकाशसँग मिसिएको ठूलो स्कूल भवन विन्डोबाट प्रकाश चुहिन गइरहेको छ (फोटोको बायाँ अन्त)। क्लब गतिविधिहरू, परीक्षा लिदै, र उच्च माध्यमिक विद्यार्थीहरूले जाडो पनि प्रयास गर्दैछन्। ...
१२ जनवरी २०२०, बिहानको ९:०९ बजे
शुभ प्रभात 6:58 बिहान। दिन नाकानोशिमाको चासन ब्रिजबाट एक शानदार दृश्यको साथ शुरू भयो। त्यहाँ असंख्य प्रवासी चराहरू छन् जस्तै पानीमा बतखहरू दायाँ र बाँया जाँदैछन्। यदि तपाइँ जूम इन गर्नुभयो र यसलाई हेर्नुभयो भने, तपाईले देख्नुहुनेछ कि तपाई एकैचोटि सम्पूर्ण टाढा फाल्नुहुनेछ। पागल आकाशले यो बिहानीको उत्तेजनालाई अझ रमाइलो बनायो। ...
११ जनवरी २०२०, बिहानको ३:५९ बजे
शुभ प्रभात 6:51 बिहान बिहान, खैरो बादलहरू आकाशमा चारैतिर फैलियो, सूर्योदयमा बाधा थियो। शहर सुतिरहेको जस्तो देखिन्छ, सूर्य आउँदैछ पनि। १F80A यो हिजो नाकानोशिमाबाट एक टुक्रा हो। चराहरूलाई आज बिहान कहिँ पनि फेला पार्न सकिदैन, यद्यपि उनीहरूलाई उही ठाउँमा गोली हानिएको थियो। यसको सट्टा, स्ट्रिट लाइटका बत्तीहरू पानीको सतहमा प्रतिबिम्बित भए (ती सबै सबै) बग्ने झरनाजस्तो देखिन्थ्यो, र मनमोहक थिए। ...
शुभ प्रभात am बिहान पनि, आकाश अझै पनि अन्धकार छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अझै, यदि तपाइँ एक उच्च संवेदनशीलता सेटिंग को साथ क्यामेरा मा लगनुभयो भने, तपाई धेरै न्यानो बत्तीहरु देख्नुहुनेछ। भवन बत्तीको छेउमा, मैले बिहानको एक सानो टुक्रा देखें। बर्षको बिहान, ट्यूलिप्स अन्तिम गिरावट रोपेको छ। १ सेमी ...
९ जनवरी २०२०, बिहानको ६:०९ बजे
शुभ प्रभात पछिल्लो रात देखि, झ्यालको बाहिर वर्षा र तेज बतासको कारण हल्ला भएको जस्तो देखिन्थ्यो, र यो खस्यो र बिहानसम्म पनि बन्द भयो। अझै, यस्तो देखिन्छ कि केही मानिसहरू पार्कमा छाता लिएर हिंडे। (मैले बाहिर जान रोकिनु पर्दछ किनकि मेरो बहुमूल्य क्यामेरा भिज्यो (* _;) / ~~~) ...
शुभ प्रभात @ 6:54 बिहान। यो मैजुरु ब्रिजको माथिबाट बिहान हुनु अघि एक शानदार दृश्य हो। प्यालेटमा मिसिएको बैजनी र म्याडेरको शेडहरूको बादल रहस्यमय छ। अग्रभूमिमा, सडक बत्तीहरू द्वारा उज्यालो उकिमिडो स्पष्ट देखिन्थ्यो। आज कोसाकू हो, २ 24 मौसमको २rd औं स्थान। यसलाई "चिसो" पनि भनिन्छ। क्यालेन्डरका अनुसार चिसो जाडोको मौसम वसन्त भन्दा अघिल्लो दिनसम्म सबैभन्दा कठोर मानिन्छ। क्यालेन्डरका अनुसार तपाईको खुट्टाबाट चिसो दिनहरू जारी रहन्छ। ...
७ जनवरी २०२०, बिहानको ६:५९ बजे
शुभ प्रभात7बिहान सूर्योदय हुनु अघि। आकाश अझै राती तानिरहेको जस्तो देखिन्छ, र मलाई सूर्योदयको भावना पनि छैन। यसैबीच, म एक रहस्यमय प्रकाश भेट्न आएँ। खाली सानो बादलमा एक खाली ठाउँ। यसबाट प्रकाश चुहिन पानीको सतह (सबैजना) रोकिन्छ, स्पटलाइट जस्ता। यस्तो स्पष्ट कन्ट्रास्टको साथ प्रकाश दुर्लभ छ। ...
शुभ प्रभात मौसम पूर्वानुमानको विपरित, चिसो बत्ती वर्षा बिहान :30: .० पछि खस्यो जब म शूटिंगको लागि गएँ। तापक्रम थोरै खस्यो भने के हिउँ पर्ने छ? मलाई लाग्छ 6:59 बिहान आकाश गाढा खैरो बादलले ढाकिएको छ, तर केवल क्षितिज शहर बत्तीहरूको वरिपरि। यो पानीको सतह (सबै सबै) मा प्रतिबिम्बित र एक शानदार भव्य दृश्य सिर्जना। ...
५ जनवरी २०२०, बिहानको १०:४८ बजे
शुभ प्रभात विगतका फोटोहरू परिचय गराएर हामीलाई आज र भोलि क्षमा गर्नुहोस्। m (_ _) m ओहोरी पार्कको महानता, जुन नयाँ वर्ष आउँदा परिवर्तन हुँदैन। सात परिवर्तनको बिहान हुनु भन्दा पहिले म आकाशबाट छक्क पर्छु। नाकानोशिमा र चासनबशीमा ढु stone्गाको लालटेनहरू पनि सहयोगी भूमिकाको रूपमा दृढ उपस्थिति हुन्छ जसले दृश्यलाई सँधै बृद्धि गर्दछ। ...
४ जनवरी २०२०, बिहानको ४:३४ बजे
शुभ प्रभात बोथहाउसको अगाडि उभिएको विशाल रूख पनि प्रतीक हो जुन तपाईंलाई दक्षिणी देशको सम्झना गराउँछ। म बिहानको सूर्य अर्को तर्फबाट उदाउँदो दुई शटहरू मन पराउँछु। आज म कुमामोटो क्यासल हेर्न जाँदैछु। कुमामोटो भूकम्प पछि चार बर्ष बितिसकेको छ। ढलेको महल कडा परिश्रमको कारण हरेक दिन परिवर्तन हुँदैछ। जब तपाइँ मिनामी एसो भ्रमण गर्नुहुन्छ, यो सँधै एक ठाउँ हुदै जान्छ। ...
शुभ प्रभात 6:13 बिहान तापक्रम जुन नजिक फ्रिजिंगमा खस्केको छ यसले सम्पूर्ण शरीरलाई असर गर्दछ। यो समय हो जब तापक्रम सबै भन्दा बढी खस्छ। जब तपाईं बोथहाउसको अवतरणमा पोलमा प्रकाश चम्काउनुहुन्छ, तपाईं पानीको सतहमा प्रतिबिम्बित सममितिको ज्वलंत दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यो बिहानी हुनुभन्दा अघि हो जब स्ट्रिटलाइटहरू सहज छन्। ...
२ जनवरी २०२०, बिहानको ८:५३ बजे
शुभ प्रभात 6:59 बिहान सूर्योदय समय बितिसकेको छ, तर आकाश तपाईले देख्नु भएको जस्तै आकृति हो। जहाँसम्म, सममिति संसार पानीको सतहमा प्रतिबिम्बित हुन्छ (सबै) अद्भुत थियो किनकि मैले पारदर्शिता महसुस गर्न सक्थें। नयाँ वर्षको पूर्व संध्या। आज म वार्षिक किनमेलमा जान्छु। Yanagibashi बजार मा sashimi पहेलोपना पछि, हामी उही बजार मा पसलहरु बाट नयाँ साल को आदेशहरु लिन हुनेछ। राशि शिल्प सब्जीहरु धेरै सुन्दर छन्। ...
१ जनवरी २०२०, बिहानको ३:१९ बजे
२०२० मा नयाँ वर्षको शुभकामना (रीवा २)। 7:38 बिहान। लामो-प्रतीक्षित सूर्योदय ऊर्जा को एक पूर्ण बन्द दिन्छ। तापमान २ डिग्री। यद्यपि यो जाडोमा सब भन्दा चिसो छ, त्यहाँ मैइजुरु ब्रिज वरपर २०० भन्दा बढी मानिस थिए जो पहिलो सूर्योदयको पूजा गर्न भेला भएका थिए। मैले पछाडि मैजरु ब्रिजको साथ दुई शटमा हेलें। जलमार्गमा प्रतिबिम्बित "अर्को सूर्योदय" पनि दृश्य दृश्यमा सफासँग प्रविष्ट गरियो। ...
१ जनवरी २०२०, बिहानको ३:१८ बजे
शुभ प्रभात 6:42 बिहान बिहानको चमक यति स्पष्ट थियो कि त्यहाँ कुनै बादल थिएन, र यो पानीको सतहमा प्रभावकारी थियो (सबैजना) बोथहाउस रेस्टुरेन्टको ठूलो विन्डोमा प्रतिबिम्बित। बीचमा स्ट्रिटलाइटहरू र व्हेल पार्कमा खेल मैदान उपकरणहरू पनि उत्कृष्ट छन्। ...
३० डिसेम्बर २०१९, बिहानको ५:२२ बजे
शुभ प्रभात वर्षाको बिहान। पछिल्लो रातबाट चिसो वर्षा वर्षा बिहान पनि रोकिदैन। यो बिहान फोटो शेल्फबाट एक परिचय हो। केहि दिन अघि। जब शुटि duringको क्रममा मेरा खुट्टामा हेरे, एउटा ऑस्कर डक आए। म मेरा आँखा देख्दिन, यो मैले खान लागिरहेको खाना हो। यो प्रभावकारी थियो कि मैले पानीको मुर्खामा मेरो फेदर धागोदेखि फिन्स सम्म सबै देख्न सकें। ...
शुभ प्रभात 6:52 बिहान तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, बादल मुख्य पात्रहरू हुँदा आकाश बिहान हुनुभन्दा अघि हो। बिहानको स that्केत जुन क्षितिजभरि स्पष्टै देखिन्छ देखिएको छ विहानको आगमनको घोषणा गर्दै। , बिहान सबेरै जब चिसो हावा बग्यो। रस्टलिंग र मृत पातहरू नाच गर्छन् र किनारमा लगिन्छन्। तपाईले भेट्नु भएको सडकबत्तीहरूको न्यानो बत्तीहरूले तपाईंको हृदयलाई निको पार्छ। ...
शुभ प्रभात वर्षाको बिहान। म शूट गर्न बाहिर जान सक्दिन, त्यसैले मैले आफ्नो कम्प्युटरमा तस्विर शेल्फलाई तल मोड्यौं। यो years बर्ष अघि थियो। सप्ताहन्तको दिनमा एक राम्रो दृश्य फेला पर्‍यो। मलाई अनजानमै हाँस्नको सम्झना भयो किनकि दुई सहकर्मीहरूले आफ्ना पखेटा एक साथ गरेर फैलाउँदै थिए। त्यहाँ पंक्तिबद्ध हंस पनि प्यारा (◠‿◠) १F80A छ ...
शुभ प्रभात यो बिहानी बिहान थियो। तपाईं शूट गर्न बाहिर जान सक्नुहुन्न, कृपया केही दिन पहिले लिइएको "वर्षा इलमिनेसन" हेर्नुहोस्। गत बिहिबार, एक स्वयम्सेवक समूह बैठक पछि, हामी एक पार्क, जहाँ एक सुन्दर रोशनी संसार फैलिएको थियो। मिजुकी ब्रिज माथि प्रकाशको सानो क्षेत्र एउटा ब्यान्डमा परिणत भयो, जुन पानीको सतहमा प्रतिबिम्बित हुन्छ र शानदार थियो। रेनड्रपहरूले पनि एक अद्भुत प्रभाव दिए। ...
३० डिसेम्बर २०१९, बिहानको ५:२१ बजे
शुभ प्रभात 6:52 बिहान सूर्योदय को दिशा मा पूर्वी आकाश कालो बादल संग ठोस छ। यद्यपि दक्षिणी आकाश एक सुन्दर सूर्योदय हो। त्यहाँ केही अनौठो कुरा छन्। बिहान :30: .० तिर जब म शूट गर्न गएको थिएँ, एक सानो चिसो वर्षा पप्पिंग गर्दै थियो। म खुसी छु कि धेरै वर्षा हुँदैन। ...
शुभ प्रभात @ 6:55 बिहान एक खैरो आकाश जुन "विलक" जस्तै आज बिहान विरलै छ। प्रभात पछि, आकाश रातो देखिँदैन। यस्तो देखिन्छ जस्तो कि व्हेल पार्कको सुजुकाकेमा ठूलो रूखको मरे पत्तीले "लेट शरद yetतु सकिएको छैन" भन्दै छ। Nakanoshima को स्ट्रिटलाइट कि परे देखिन्छ पनि न्यानो छ। क्रिसमस पूर्व संध्या। हव्वा साँझ हो ...
शुभ प्रभात मेरी क्रिसमस ♪ ('θ ｀) :11:११ बिहान। जब मैले सत्सुकी ब्रिजबाट पूर्वी आकाश देखेको थिएँ, तब बिहानको पैदल यात्रामा आनन्द लिइरहेका चराहरूको फ्लाइट फ्लाइटको सामना गरें। मैले आकाशमा पर्सेमोन र freeमा उडिरहेको देखेको थिएँ। हिजो क्रिसमस ...
जाडो अक्रान्त बिहान। कहिले काँही साना वर्षावहरु पनि चिसो लाग्दैन। 7:00 बिहान एग्रेट रातको फ्याग्लूले घेरिएको पार्क पोखरीमा सडक बत्तीको बत्तीमा सेतो चमक दिन्छ। जाडोमा संक्रान्तमा, जब रातको समय वर्षको सबैभन्दा लामो हुन्छ, त्यहाँ नानजिंगमा कद्दू राखेर yuzuyu प्रवेश गर्ने चलन छ। भनिन्छ कि कद्दू खाँदा मध्यम हावाको परिणाम हुँदैन, र यो लामो समयसम्म बाँच्न भनिन्छ। ...
शुभ प्रभात 6:46 बिहान हिजो रात पछि भएको वर्षा रोकिएको छ, तर आकाश हल्का खैरो रंगमा रहन्छ। तर यसको लागि धन्यवाद, म बिहान सबेरै भेट्न सक्तिन, जुन रातको दृश्य देखिन्छ। न्यानो बिहान। ...
शुभ प्रभात बिहान7बजेतिर नाकनोशिमाबाट एकोर्न पार्कलाई हेर्दा तपाई पोखरीको थाकमा धेरै सेतो एसेरेट देख्न सक्नुहुनेछ। बिहानको खाजाको लागि समय आएको छ। तपाईंको ठूलो पखेटा फैलाउनुहोस् र सबै एकैचोटमा अफ गर्नुहोस्। हिजो एक फुकुओका वर्ष-अन्त पार्टी थियो जसमा होक्काइडो र टोकियोका साथीहरू थिए। बाटोमा मैले नाका नदीमा पानीको पानी देखे जुन तेन्जिन र हकाता वार्डहरूका बीचमा बग्थ्यो। फुकुओका नागरिकको रूपमा यो मेरो लागि पहिलो अनुभव हो। ...
शुभ प्रभात 6:52 बिहान। बिहान हुनुभन्दा अघि यो जाडोमा चिसो दिन। यो समय हो जब तापक्रम सबै भन्दा कम हुन्छ। हिजो वर्षा पछि लामो समय पछि, आज बिहान, एक लामो समय पछि, म एक अद्भुत स्तर परिवर्तन आकाश बाट अल्ट्रामारिनमा आयो। मेरो मनपर्ने सडक रूखको टाढा पट्टि, zelkova, उनले एक सुन्दर अर्धचन्द्राकार सम्म शूटिंगमा भाग लिइन्। स्ट्रिटलाइट न्यानो देखिदैन? ...
शुभ बिहान ::50० बिहान। आज बिहान आकाश खैरो रंगिएको छ। जे होस् सूर्योदय समय नजिकै छ, पार्क अन्धकारमा डराएको छ। यस बीच, पार्क मा फुकुओका शहर संग्रहालय नियमित रखरखाव हो, वा दोस्रो तल्ला लबी तातो बत्तीहरूले भरिएको छ। नाकानोशिमाबाट देखीएको, बत्तीहरू पानीको सतह (मिनामो) मा प्रतिबिम्बित धेरै सुन्दर थिए। ...
शुभ प्रभात 6:52 बिहान। यो बिहान सब भन्दा पहिले हो जुन बोथहाउसको डकहाउस मार्फत देखिन्छ। बादलहरू फिक्का फिल्टरहरूमा परिवर्तन भए र हामीलाई र colors्गको अद्भुत संसार देखायो। ...
शुभ प्रभात शुभ समय, बिहान :0:०7 के तपाईं माईजुरु ब्रिजको माथिबाट केहि असामान्य फोटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ? पानीको सतह (ती सबै) प्रमुख भूमिका हो। यदि तपाईंले शटर गति करीव seconds सेकेन्ड सम्म धीमा गर्नुभयो भने ताल ताल सतहमा पालेको गिलास जस्तो देखिनेछ, रमाइलो वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्। बिहानको चमक त्यहाँ प्रतिबिम्बित पनि सुन्दर छ! ...
शुभ प्रभात 6:49 बिहान ढिलो सूर्योदय अन्तमा सुरु हुन्छ। जब पूर्वी आकाश रातो हुन्छ, हामी सतहमा धेरै प्रवासी चराहरू हिड्ने रमाईलो गर्छौं। यो जाडो, जब तापमान सजीलो नबस्न, अन्ततः एक शिक्षक जस्तै भयो। अझै, पुराना दिनहरूको रहस्यमय वर्ष जहाँ तपाईं अझै बाँकी शरद पातहरू रमाउन सक्नुहुन्छ। ...
शुभ प्रभात 6:51 बिहान। यो सूर्योदय समय हो, तर म यसलाई आकाशमा पनि देख्न सक्दिन। त्यो अवस्थामा, अब फरक दिशामा हेरौं। मइजुरु ब्रिजबाट दक्षिणतिर हेर्दा, तपाईं धेरै चमकदार प्रकाश ब्यान्डहरू देख्न सक्नुहुनेछ जुन पानीको सतहमा दूरीमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। अग्रभूमिमा असंख्य हाँसाहरू छन्। के तपाई देख्न सक्नुहुन्छ? ...
३० डिसेम्बर २०१९, बिहानको ५:२० बजे
३० डिसेम्बर २०१९, बिहानको ५:१९ बजे
शुभ प्रभात बिहान7बजे। यो एक बिहान मिजुकी ब्रिजमा पक्राऊ कार्यक्रम हो। उत्तरबाट चलेको बतास हवाको वेग १० मिटर भन्दा बढीको लागि पुग्दो हुन्छ, र यसलाई टाढा लैजान सकिन्छ। आकाश संदिग्ध बादलले ढाकिएको थियो, तर प्रकाशले खाली ठाउँहरू खोल्यो भनेर पानीको सतहमा (ती सबै) प्रतिबिम्बित भयो र एक अद्भुत दृश्य देखाउनुभयो। "म ओहोरी पार्कलाई फायरफ्लाइजको साथ ओएसिस बनाउन चाहन्छु।" पार्कको व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्ने स्वयम्सेवक समूहको सानो सपना। ...
२८ डिसेम्बर २०१९, बिहानको ४:३० बजे
२५ डिसेम्बर २०१९, बिहानको ५:४० बजे
२४ डिसेम्बर २०१९, रातिको १२:४५ बजे
२२ डिसेम्बर २०१९, बिहानको ९:०२ बजे
२१ डिसेम्बर २०१९, बिहानको ३:३३ बजे